Budata DAEMON Tools Lite 10.13 maka Windows
Ikpo okwu: Windows |dị: 10.13 Asụsụ: Bekee
Free Budata maka Windows (0.66 MB)
Budata DAEMON Tools Lite,
DAEMON Ngwaọrụ Lite bụ mmemme imepụta ihe eji eme ihe na - akwụghị ụgwọ ị nwere ike mepee faịlụ onyonyo na ISO, BIN, CUE extensions site na ịmepụta diski mebere. DAEMON Ngwaọrụ Lite bụ sọftụwia nwere ntụkwasị obi na ntụkwasị obi na-enye ndị ọrụ ohere ngwa ngwa na ngwa ngwa ịmepụta diski mebere (draịva) na kọmpụta ha. Site nenyemaka nke diski mebere ị ga-emepụta, ị nwere ike iji CD na DVD draịva ị debere na mbụ dị ka onyogho.DEMON Ngwaọrụ Lite na-akwado ndọtị niile ama dịka CCD, BWT, MDS, CDI, NRG, PDI, B5T, CUE, BIN, ISO na ISZ.
Have nwere ohere iji kpọọ faịlụ onyonyo achọrọ site na enyemaka nke mmemme dị iche iche dịka Ime Anwansi ISO ma ọ bụ Power ISO.Ihe ị ga - eme bụ ịhọrọ faịlụ onyonyo na diski ike gị ma debe ha na draịvụ mebere nke ị mepụtara site na enyemaka nke DAEMON Ngwaọrụ Lite. Site na enyemaka nke mmemme a na-agbachi nkịtị na sistemụ sistemụ, na -emepụta diski mebere, ịtụkwasị kwalite asụsụ ọma na diski na ọtụtụ ndị ọzọ na usoro ngwa ngwa nụzọ ụfọdụ i nwere ike ime ka ọ na-eme.
Kedu ka DAEMON Ngwaọrụ si arụ ọrụ?
Site nenyemaka nke mmemme nke na-enye gị ohere ịmepụta faịlụ onyonyo gị nke ị nwere ike iji na diski mebere, yana ịmepụta diski mebere na iji diski mebere; Nwere ike ịchekwa data dị na diski CD / DVD / Blu-ray gị na kọmpụta gị dị ka faịlụ onyonyo nwere ndọtị ISO, MDS, MDF na MDX.
DAEMON Ngwaọrụ Lite, nke na-enye gị ohere ịmepụta draịva arụmọrụ 4, na-egbo mkpa ndị nkịtị. kọmputa ọrụ. Ihe omume a, nke na aru oru na nkwekorita CD na DVD nile, mezue usoro ntughari nenweghi nsogbu nagbanyeghi usoro nchedo nke CD na DVD mgbe ichoro ike ihe onyonyo nke gi.
mmemme okike diski nahịaDAEMON Ngwaọrụ Lite bụ otu sọftụwia ị ga-ahọrọrịrị ịmepụta ngwa arụmọrụ yana faịlụ onyonyo gị.
DAEMON Tools Lite Ụdịdị
Nha faịlụ: 0.66 MB
Mmepụta: Disc Soft
Kacha ọhụrụ na: 13-12-2021